अनौंठो प्रेम! सेनाका जवानसँग प्रेम भएपछि पतिलाई दिईन् डिभोर्स , छोरी जन्मेपछि सेनाका जवानले भने ‘तलाई म चिन्दिन’ « Gaunbeshi
अनौंठो प्रेम! सेनाका जवानसँग प्रेम भएपछि पतिलाई दिईन् डिभोर्स , छोरी जन्मेपछि सेनाका जवानले भने ‘तलाई म चिन्दिन’
एजेन्सी। बिवाहित महिला एक सैनिक जवान प्रति आकर्षित हुन्छिन् । उनको त्यो प्रेम सेनाका जवानसँग ब्यक्त गर्छिन् । ती सैनिककै सल्लाहमा उनले आफ्नो पतिलाई डिभोर्स समेत दिइन् । जवानले ती महिलासँग बिहे गरे । उनलाई भाडामा कोठा लिएर राखेका थिए । एक बर्ष पछि उनीहरुको छोरी समेत जन्मिइ । परिवार राम्रै चलिरहेको थियो, त्यति नै बेला भएको एक यस्तो घटनाले बैवाहिक जीवन नै सकिने अवस्था आयो।